Gaari uu watay wasiir oo gabar yar ku dhaawacay Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Gaari uu la socday wasiirka qorsheynta Soomaaliya, Saciid C/llaahi Maxamed (Dani) ayaa saaka gabar 15 jir ah ku jiiray degmada Xamar Jajab ee magaalada Mqudisho, iyadoo gabadhaas uu dhaawac soo gaaray.
Shilkaan ayaa ka dhacay agagaarka shirkaddii Somali Fruit ee ku dhow dekedda Muqdisho, waxaana gabadha oo dhaawac ah lagu qaaday mid ka mid ah gawaarida galbineysay wasiirka, sidaas waxaa Radio Mustaqbal u sheegay mid ka mid ah daka degmada Xamar Jajab.
Lama oga ilaa hadda xaaladda ay ku sugan tahay gabadhaas uu dhaawaca gaarsiiyey gaariga lagu weday wasiirka qorsheynta Saciid C/llaahi Dani.
Shilalka ay geystaan gaadiidka AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya ayaa sii kordhaya, waxaana shilkii ugu dambeeyey ku dhintay wiil arday ah oo gaari ciidamada Nabad Sugiddu leeyihiin uu sabitidii la soo dhaafay ku dilay agagaarka Hotel Ramadan ee degmada Yaakhsiid.
Jawaari: Xitaa sarkaal kormeer ah kama imaan karo Sierra Leone